About Us - Hebei Bailixin Home Textile Co., Ltd.
"BAILIXIN" naorina in1996, miorina ao amin'ny tanàna lamba Shinoa ------ Gao Yang, Hebei, izay manana ny mety fitaterana, mifanila an'i Beijing sy Tianjin .IT manarona 16.5acres, ny fitambaran'ny fananan'ny mihoatra noho 3.5 arivo tapitrisa, izay iray amin'ireo orinasa voalaza.
"BAILIXIN" orinasa mifantoka amin'ny fanondranana ho 20 taona mahery, izay tsy vitan'ny hoe no nitarika tanteraka ny OEKO Tex Mijoroa 100 Certification, fa koa dia iray amin'ireo mpikambana Sedex Walt Disney sy fahazoan.
Amin'ny lafiny iray, "BAILIXIN" manana ny Italy`s nitarika fitaovana sy ny fomba fitantanana internationalized, Amin'ny lafiny iray, izany koa specializes amin'ny famolavolana, fikarohana, famokarana sy ny varotra.
"BAILIXIN" company`s vokatra any an-trano lamba manerana ny Vondrona Eoropeana, Southeast Asia, izay fanondranana entana any Japana, Korea Atsimo, Angletera, Frantsa, Amerika, Kanada, ary ny hafa firenena sy ny faritra 34.
Ambonin'ny zavatra rehetra, "BAILIXIN" boky fanondranana laharana voalohany Hebei faritany manodidina rehetra ny taona.
Company fampandrosoana ny tantara
1996, ny orinasa no hita
2000 an-trano ny marika "LiXin"
2000 Nanangana minisitry ny varotra any ivelany, hiditra ao amin'ny tsena iraisam-pirenena
2005 dia nandray anjara tao amin'ny Canton Fair
2010 Ampio faharoa fototra
2015 isan-taona fanondranana boky ny 10.000 taonina